Wareysi aan la yeelanay laanta socdaalka Sweden. | Somaliska
Socdaalka / Wareysiyada
Ka dib su'aalo badan ee nooga yimid akhristayaasheena ayaan la xiriirnay xafiiska saxaafada ee Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket). Hadaba wareysigeena sidaan ayuu u dhacay. Somaliska: Soomaalida degenaanshaha ka xareysaneysa Kenya ama Ethiopia miyay u baahanyihiin in ay keenaan baasaboor? haddii jawaabtu haa tahay, baasaboorkee ayay keenayaan? Migrationsverket: Haa, waxaa laga doonayaa in ay keenaan baasaboor ay si sharci ah ku heli karaan. Somaliska: Qaar ka mid ah dadka aad sharciga siisaan waxaad u sheegtaan in la siiyay magangalyo, dadkaas sharciga keenista kharaabada ma qabanayaa? Migrationsverket: Dadka loo aqoonsadey qaxootiga ee Geneva iyo dadka magangalyada la siiyay iyadoo la eegayo sharciga Midowga Yurub sharcigaas ma qabanayo, balse dadka magangalyada lagu siiyay ayadoo la eegayo sharciga Sweden sharcigan wuu qabanayaa. Somaliska: Ma noo sheegi kartaa calaamadaha sharciga Geneva? Migrationsverket: Waa kuwan qaar ka mid ah calaamadaha sharciyada aan bixino.
1.FSF+A3 - Qaxootiga Geneva.
2. ASSF+A7 - magalyo ayadoo la eegayo sharciga Midowga Yurub .
3. ÖSSF+A8-A9 - Magangalyo iyadoo la eegayo Sharciga Sweden.
Somaliska: Qasab miyaa in waalidka ama caruurta laga qaado dhiiga DNA? Migrationsverket: Maya, Waa haddii qofka uu raali ka yahay. Somaliska: Go'aan cusub ee ay soo saartay Laanta Socdaalka ayaa faraya in Soomaalida sharciga ka dalbanaysa Afrika ay tagaan Nairobi ama Addis Ababa, ka waran dadka jooga Kampala? Migrationsverket: Soomaalidu sidoo kale sharciga way ka dalban karaan Kampala. Somaliska: Dadka sharciga dalbanaya fara miyaa looga qaadaa safaaradiina Addis Ababa ama Nairobi? Migrationsverket: Jawaabta su'aashaan waxaa bixin kara Hay'ada Sharciga, aniga kama jawaabi karo. Somaliska: Qof hada guursadey ee xaaskiisa ama saygeeda uu Kenya joogo suurto gal ma u tahay in ay u dacwoodaan? Migrationsverket: Waxay ku xirantahay qofka nuuca sharciga uu haysto. Somaliska: Qof wayn ma u dacwoon karaa waalidkiis sida hooyo ama aabe? Migrationsverket: Waalidku waa in ay iskood u dalbadaan sharciga, ayadoo la eegayo sharciga Sweden ayaa xaaladooda la eegi doonaa. Somaliska: Imisa qof oo soomaali ah ayaa sanadkan 2010 qaxootinimo ka dalbaday Sweden? Migrationsverket: Waxaa iska dhiibay Sweden 2838 qof oo soomaali ah 2010. Wareysigaan waxaan ku qaadney e-mail, marka nooma suurto galin in aan jawaab celin la sameyno laanta socdaalka. Waxaan rajenaynaa in aad jawaabo muhiim ah ka hesheen Laanta Socdaalka.
Wareysi aan la yeelanay laanta socdaalka Sweden.
Ka dib su’aalo badan ee nooga yimid akhristayaasheena ayaan la xiriirnay xafiiska saxaafada ee Laanta Socdaalka Sweden (Migrationsverket). Hadaba wareysigeena sidaan ayuu u dhacay.
Somaliska: Soomaalida degenaanshaha ka xareysaneysa Kenya ama Ethiopia miyay u baahanyihiin in ay keenaan baasaboor? haddii jawaabtu haa tahay, baasaboorkee ayay keenayaan?
Migrationsverket: Haa, waxaa laga doonayaa in ay keenaan baasaboor ay si sharci ah ku heli karaan.
Somaliska: Qaar ka mid ah dadka aad sharciga siisaan waxaad u sheegtaan in la siiyay magangalyo, dadkaas sharciga keenista kharaabada ma qabanayaa?
Migrationsverket: Dadka loo aqoonsadey qaxootiga ee Geneva iyo dadka magangalyada la siiyay iyadoo la eegayo sharciga Midowga Yurub sharcigaas ma qabanayo, balse dadka magangalyada lagu siiyay ayadoo la eegayo sharciga Sweden sharcigan wuu qabanayaa.
Somaliska: Ma noo sheegi kartaa calaamadaha sharciga Geneva?
Migrationsverket: Waa kuwan qaar ka mid ah calaamadaha sharciyada aan bixino.
1.FSF+A3 – Qaxootiga Geneva.
2. ASSF+A7 – magalyo ayadoo la eegayo sharciga Midowga Yurub .
3. ÖSSF+A8-A9 – Magangalyo iyadoo la eegayo Sharciga Sweden.
Somaliska: Qasab miyaa in waalidka ama caruurta laga qaado dhiiga DNA?
Migrationsverket: Maya, Waa haddii qofka uu raali ka yahay.
Somaliska: Go’aan cusub ee ay soo saartay Laanta Socdaalka ayaa faraya in Soomaalida sharciga ka dalbanaysa Afrika ay tagaan Nairobi ama Addis Ababa, ka waran dadka jooga Kampala?
Migrationsverket: Soomaalidu sidoo kale sharciga way ka dalban karaan Kampala.
Somaliska: Dadka sharciga dalbanaya fara miyaa looga qaadaa safaaradiina Addis Ababa ama Nairobi?
Migrationsverket: Jawaabta su’aashaan waxaa bixin kara Hay’ada Sharciga, aniga kama jawaabi karo.
Somaliska: Qof hada guursadey ee xaaskiisa ama saygeeda uu Kenya joogo suurto gal ma u tahay in ay u dacwoodaan?
Migrationsverket: Waxay ku xirantahay qofka nuuca sharciga uu haysto.
Somaliska: Qof wayn ma u dacwoon karaa waalidkiis sida hooyo ama aabe?
Migrationsverket: Waalidku waa in ay iskood u dalbadaan sharciga, ayadoo la eegayo sharciga Sweden ayaa xaaladooda la eegi doonaa.
Somaliska: Imisa qof oo soomaali ah ayaa sanadkan 2010 qaxootinimo ka dalbaday Sweden?
Migrationsverket: Waxaa iska dhiibay Sweden 2838 qof oo soomaali ah 2010.
Wareysigaan waxaan ku qaadney e-mail, marka nooma suurto galin in aan jawaab celin la sameyno laanta socdaalka. Waxaan rajenaynaa in aad jawaabo muhiim ah ka hesheen Laanta Socdaalka.
Dhalinyaro la doonayo in lagu celiyo Soomaaliya
Laanta socdaaljka oo gabaryar oo sanad iyo bar jirta u musaafurineeysa Israa’iil
Sweden oo aan sanadkaan Soomaali ka soo qaadayn xeryaha qaxootiga
June 2, 2010 at 09:31
waad mahadsantahay sxb jimcaale sida aad noga haqabtiro bahida wararka wadankaan ,,, sxb sida ka muqato jawabtaan…
..qofka heysto sharciga AC dhankee ayaa lagu tirinayaa mahadsanid
waad mahadsantahay sxb muumin, sida iska cad waxaan ahayn calaamadaha kor lagu xusay waxay soo galayaan magangalyada Iswiidhan ay siiso dadka ay wadankooda ka jirto xaalad cakiran – sida soomaaliya, marka halkaas ayaan ku tirinayaa walow aanan warbixin qaas ah ka hayn nuuca AC.
June 4, 2010 at 10:59
asc waakusalamay s kabacdi waxaan rabaa inaa waxka ogaado qaarkamida sharciyada oon inta laguxusin sida M3 oo kale marka waxaan doonaayaa inaan wax ka ogaado in sharcigaan uu kamid yahay sharciyada uusan khabanay sharcigaan lasoosaaray mahadsanid jimale
June 8, 2010 at 08:13
wa caleykum wasalam walaal cusman, runtii anaga ma hayno liis sharaxaya calaamadaha sharciyada, sida loogyahay soomaalida inteeda badan waxaa la siiyaa magalyada iswiidhan lama siiyo sharciga genava ama kan EU.da dad yar mooyee.
balse si aad u hubsato, warqada sharciga lagugu siiyay ayaa waxaa ku qoran sharciga lagu siiyay nuuciisa iyo haddii lagu siiyay kan geneva iyo in kale.
ASC walaal waa ku salaamay adiga jimcaale iyo dadka ku la wado hawushaan qiimaha u leh dadka soomaliyeed .
Walaal aniga waxaan aad udanaynayaa sharciga passportka ogaalkaaga Jimcaale ahaan maxaa fikrad iga siin kartaa ?
Walaa cabdirizak arinta baasaboorka horey ayaan wax uga qornay halkaan ayaad ka akhrisan kartaa http://somaliska.com/warbixin-ku-saabsan-baasaboorka-iyo-dhiiga-dna/
mida kale waxay ku xirantahay halka aad joogtid sida aan filaayo dadka Kenya ama Ethiopia jooga waxaa laga rabaa baasaboorka ay bixiso safaarada soomaaliya ee ku taala wadamadaas.
June 24, 2010 at 21:18
Walaal Jimcaale waa Salaamay salaan kadib Passportka in ay Safaarada aqbasho wax muhiimad ah anaga nooma leh ee Migrationka halkaan joogo Norrköping ma aqbalayaan arintaas ayaan rabaa in aan wax ka ogaada koley nin wax badan og baa tahaye
Walaal inta aan ogahay haddii aad ka wadid baasaboorka in loo aqbalo mid aqoonsi kuu noqda ee iswiidhan dhexdeeda taas ma jirto. balse baasaboorka waxaa lagu xujeeyay dadka soomaalida ah ee dacwada ka xareysta wadamada Kenya, Ethiopia iyo Uganda.
June 24, 2010 at 21:29
http://www.migrationsverket.se/include/lifos/dokument/www/100421103.pdf walaal waxaa aqrisaa maqaalkaan waa go’aankii ugu horeeyey ee laga gaaro qof somali ah oo dibada kasoo dalbaday sharciga daganaashaha si ay ula midowdo ninkeeda oo la gaaro kadib go’aankii Passport ku saabsanaa wuxuuna sharaxayaa sida qof somali ah oo Sharciga daganaashaha dibada kasoo dalbado loo dhaqmayo.
http://www.migrationsverket.se/include/lifos/dokument/www/10031260.pdf waxaa kaloo aqrisaa Go’aankaan waxaa ku qoran in dowlada Sweden aysan aqoonsanayn wax ducoment ah oo kasoo baxay somalia wixii ka danbeeyey 1991 iyo sida ay ukala saarayaan ducoment-yada
Maadaama aad adiga ishii macluumaadka gacantaada ku jirto ma jirtaa dad loo ogolaaday in ay lasoo midoobaan qaraabadii sweden joogto go’aankii passportka kadib
June 24, 2010 at 21:34
Waad mahadsantahay walaal macluumaadka aad na siisay horey ayaan u arkay kiisaan – waa run in dowlada iswidhan aysan aqoon saneyn baasaboorka soomaaliya sidaas darteed ayaan awal soomalida baasaboor la waydiin jirin balse goaan cusub oo ay gaartay maxkamada socdaalka ayaa qasbay in qofkasta uu baasaboor keeno sida aan wararka ku helnayna safaarada sweden ee afrika waxay u diraan dadka in ay soo sameystaan baasaboorka cusub ee e-passport oo ay ka sameystaan safaarada soomaalida sida mida Kenya.
runtii waan jeclaan lahayn in dadka arintaan maray ay nala soo xiriiraan oo ay noo soo sheegaan haddii loo diiday iyo haddii loo ogolaaday ka dibna waxaan daba gal ku sameyn lahayn arimaha.
June 24, 2010 at 21:46
Waa mahadsantahay walaal Soomaalideena waa dad iska jecel in ay arimohooda qarsadaan lakin insha allah Kheyr ayeey ku dhamaan doontaa .
Waxaa jiro urur la dhaho Somali Asyl Grupp. Wuxuu u qoray warqad Hay’adda socdaalka qaybta qaabilsan arimaha Sharciyada Qaybteeda Safaaradaha marka waxaa laga dhowrayaa jawaab marka ay timaado ayaan insha allah kuusoo guddbinaynaa ururkaasna wuxuu aad udanaynayaa in aad xariir la samayso ama aad telefonkaaga usoo qorto Somaaliasyl.bolgspot.com halkaas ayaa ka heleysaa dadka wada emailkooda iyo telefonadooda .
waxaa berito jirto shir ku saabsan arimahaan cusub passport marka wixii la isla arko ayana waad heli doontaa insha allah
June 24, 2010 at 21:56
Waad mahadsantahay walaalkiis. Insha Allah noo soo gudbiya wixii akhbaar ah si ay dad badani uga faaideystaan.
July 2, 2010 at 23:47
Haye Jimcaale iska waran mala ficnoo.. haye maxaa cusub sxb?
Somaliska.com Somaliska waxa laga wada Af Somali oo swedish lagu dhahay .. somalia wa wadanka somali wa shaqsiga Somaliska Wa Luqaada.
Abdirahman (maanka) says:
Asc walaal arimaha baasaboorka qoysas badan oo soomaaliyeed ayuu caqabad u keenay marka macquul ma tahay in soomaalida ey si sharci eh u wada mudaaharaado oo peacfull eh gobolada dalkaan oo dhan si dhibka cusub ee ku soo siyaado loo wada arko xalna looga gaaro.
Haddiise ey suurta gal tahay sidee hal maalin loo wada sameyn karaa mahadsanid.
July 3, 2010 at 06:27
Walaal abdirahmaan waa run dhibaato in ay baasaboorku ku tahay dadka Soomaalida balse ilamaha in uu mudaharaad xalin karo dhibaatadaas waayo waa mid xageena ka timid. Waayo anaga ayaa dowlad la’aan ah sida sharciga Iswiidhan ahna qofkasta waa in uu baasaboor keena, walow xitaa ay ogolyihiin dadka wadanka soo galo baasaboor la’aan ee soomaalida ah.
marka aniga ilamaha in mudaharaad aan xal ku gaareyno balse haddii loo baahdo waala sameyn karaa, walow ay adagtahay in Soomaalidu ay isku raacdo fikrad.
walaal Xirsi soo dhawoow, fikradaada iyo wixii talo iyo tusaale ah noo soo bandhig insha Allah.
September 3, 2010 at 18:41
Asc dhaman wan idin salamay salan kadib jimcale sxb waxan joga magalada adis ababa ee wadanka safarada itobiyo aniga ayaa ka xareyay marka waxa ley diray aqonsi oo ah basaborka somaliga mid alale midka aad heli karto marka aniga waxan geyay basaborki hore waana leyga qabtay lakin wali wax jwb ah ma heli ok wixikale oo adis ugu bahan tahay wad igala so xarirkarta ok
September 4, 2010 at 09:00
Caleykum asalam walaal, waad ku mahadsantahay warbixinta aad na soo siisay. Insha Allah nala soo socodsii jawaabta aad ka hesho safaarada.
September 4, 2010 at 21:29
Ok insha alah aniga nila so socod sina jimcale walal aniga safarada kama sugayo jwb waxan kasugaya dowlada sweden safarada wey iga dhamatay dacwadeydane wey gudbisay waana leyga aqbalay basaborka aan geyay marka waa sida wixi jwb ah dowlada sweden magareshenka ayaa go aan ka gaarayo wixi ka sobaxa waninila so socod sin insha alah wsc wr wb
October 30, 2010 at 04:47
asc walaal marka hore waa na i salaamay salaan kadib
waxaan ni i weydiin lahaa
aniga passport ayaa la ii diray markii horay waan geeyay interveiw wax walba waa ii dhamaadeen
ninkeyga oo i dacwoonaayay oo swden jooga markii asaga interveiw-ga laga qaaday jawaabta sidii uu u sugaayay ayaa waxaa loogu soo jawaabay waxba ma na iga qaldana lkn paasapoorada soomaliga ma aqoon sanin ee cadey inaa somali tihiin oo keena waraaq cadeeneesa
marka waxaan na iga rabay walaalyaal ingoo raali ah maxaan ku cadeyn karaa warqadii dhalashadana waa iga dhuntay marka plz waxaan rabay in aad i caawisaan o hadee jiraan cadeemo kale waana mahadsantihiin sida ugu dhaqsiyaha badan thans emailkaas iigu gu soo jawaaba ama inta asc
October 30, 2010 at 07:52
W/C/S walaa runtii dhibaatada ku haysa mid adiga kugu kooban ma ahan, dadka oo dhan ayay baasaboor u diraan ka dibna appeal siiyaan. Waxaan dhihi karnaa Sweden way joojisay Soomaalida marka ma jirto warqad aad ku cadeyn kartid in aad Somali tahay oo Sweden ay aqoonsantahay. Balse rajada ayaa fiican. Isbuuca soo socda waxaan wareysi la yeelan doonaa La taliyaha Laanta Socdaalka u qaabilsan xaga sharciga oo ka mid ah dadkii soo dajiyay go’aanka Soomaalida. arinta baasaboorka aan si qaas ah wax uga waydiin doonaa. Marka Insha Allah asaga ayaan ka sugaynaa jawaabta dhabta ah.
November 1, 2010 at 07:01
walal waad mahadsantahay wixii jawaab ah waan sugeenaa insha allah
November 7, 2010 at 11:41
asc jimcaale walal wa idin salamay inta howsha ween ee ka geesatay bagekan somalida lagu saacideeyo.
walal waxa ku weediin lahaa waxaa noo soo dacwooday aabaheen oo swedan joogo waxuuna heesta shacgige geneva so mar dhow ayaa ayaa safarada ethiopia ka xareesan rabnaa si aan aabaheen ula midowno so sharciga cusub anaga wax caqabad managu yeelanayaa mise sharciga aabaheen aayaa ku badbaadeenaa asc
November 7, 2010 at 12:43
wsc walaal arinta hada Soomaalida dhibka ku heysaa waa baasaboorka, marka qofka haddii uu geneva haysto u haddii kaleba waxaa laga doonaayaa baasaboor uu aqoonsigiisa ku cadeyn karo taasoo keentay in inta badan Soomaalida la diido beryahaan. Waa laga yaabaa in ilaahey idiin indhasaabo marka kheyr ayaan idin rajeynayaa.
November 9, 2010 at 16:02
asc walal kor waxa ku soo xusteen wareesigiina dadka sharciga geneva heysato sharcigaan ma qabanaayo so waa maxay waxa aan qabaneenin bal iifaafaaji ma wax kala loola jeeda sharciga aan qabaneenin,,,,asc
c/s salaam walaal siham sharcigaan waa midkii soo baxay bishii April ee lagu amray qofkii xaaskiisa/ninkeeda dalbanaya in uu joogay wadanka 4 sano.
mida baasaboorka qofkasta way qabaneysaa oo waa laga doonayaa in ay aqoonsigooda cadeeyaan.
Walaal waxan idiinkaga mahad celinayaa sida aad isuguy howsheen sidii ad wax u fahamsiin lahayden Ummadda Soomaliyeed ee u Soo barakacday Dalkan Sweden walow aysan buuxin karin waraysiyo dhowr ah Baahida jirta hadana wa loo qaaten helitaanka intaan oo su’aallood jawabohooda waxaan idinka codsanayaa inad soo heshan inta dhiman sida su’aalo kale oo taagan sida.
1- go’aanka loga noqonayo shrciga joojinta paspor somaliga ma waxa go’an ka garaya wasaaradda socdaalka ma emmegartionka ma barlamaanka mise maxkamadda sare
November 12, 2010 at 15:41
Walaal suaashaada jawaabteeda waxaad ka heli kartaa wareysigii aan isbuucaan la jeelanahay Laanta Socdaalka. halkaan ka aqriso http://somaliska.com/wareysi-muhiim-ah-oo-aan-ka-helnay-laanta-socdaalka-sweden/
asc wrwb waan idinsalaamayaa jimcaale aniga markii hore baasaboor ayaa lay diray wax walbana way iidhamaadeen waxaan kasugayay in nin kaygiilaygeeyo markaa dhinacaa swedan ayay diidmo kasoo baxday markaa walaalo jimcaale waxaa lagu yiri nin kaygii ma aqoonsanin baasaboorka soomaaliya markaa sacwadii ayuu xaree yay malaga yaaba in markale ladoodo ama la ogolaado waayo baasa boorkii waynaa buu haystaa wadan kana 20 joogay shaqo wuu hayaa markaa maxay kudhacday in ay saasameeyaan safaarada swedan waan safaarada itoobiya taan ka xareeyay
December 22, 2010 at 13:30
Walaal wixii qoran ilaah ayaa og balse go’aan kii sweden ee ahaa qofka in uu baasaboor keensado wali taa taagan yahay, in aysan baasaboorka somaliga aqoonsaneyna wali waa taagan tahay, haddii uu baasaboor weyn leeyahay iyo in kale ma caawineyso waayo qofka laga rabo in uu aqoonsigiisa cadeeyo ee baasaboor uu ku safri karo helo waa adiga. marka waa laga yaabaa oo rajada waa fiicantahay in sanadka soo socda isbedel uu yimaado. Insha Allah.
January 15, 2011 at 21:03
maa daama war bixintaan sanadki hore aheeyd maxaa noo heeysaan oo kabedelan saaxib yaal waxaan mar walba idinka codsan lahaa wareeysigaan in aa sii wadaan si aan u ogaano natiijooyinka halka ey marayaan maa daama aan kala kulan dhibaato badan oo ah kali noolaasho waa mahadsan tihiin ok
January 15, 2011 at 22:54
Muuse walaal wararkeena cusub aqriso, wareysi kale waan la yeelanay laanta socdaalka isbuucii la soo dhaafay waxayna noo sheegeen in maxkamada ay u fadhido arinta Soomaalida oo goaan laga filayo.
ikraan mahamuud says:
mahdsanid walaal insh allah waxii dagdag ah ee so kordhaa waanka sugeeyna xagaa lanta socdaalka insh alah
abdi samad says:
February 27, 2011 at 11:31
jimcaale aad ayaad u mahadsan tahay walaalkay waxaan ku faraxno ayaad noo samaysay waxaadna mudan tahay bilad sharaf walaahi waayo dadka soomaliyeed waxay u ooman yihiin inay helaan warar muhiim u ah oo ku saabsan hadba go aaanka ka soo baxa wadanka swedan ee ku saabsan xaalka soomalida waana filayaa ianay webkan dad badan oo soomali ah ka faaiidaysan doonaan waadna mahadsan tahay walaalkay dadaalka sii wad